နှစ်သက်ရာ ကဗျာလေးများ စုစည်းမူ့: အသဲကွဲခြင်းနှင့် ခါးသက်သက် အရသာ
အသဲကွဲခြင်းနှင့် ခါးသက်သက် အရသာ
အခုတစ်လော ကျွန်တော် တို့ လူငယ်တွေတော်တော်များများ တွေ့ကြုံနေကြရတာတော့ အသဲကွဲကြတာပါပဲမတူညီကြတဲ့ အခြေအနေကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ်….သဘောထားမတိုက်ဆိုင်ကြလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်တစ်ဦးယောက်ကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ်…နှစ်ယောက်စလုံးကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ်…..အချစ်ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်အောက် က ချစ်သူနှစ်ယောက် လမ်းခွဲကြတဲ့အခါ…….အနည်းနဲ့အများတော့
နှစ်ယောက်စလုံးမှာ စိတ်ဒါဏ်ရာ ရတတ် ကြပါတယ်…. ခံစားကြရပါတယ်……ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်… ပြင်ဆင်လို့ မရနိုင်တော့တဲ အခြေအနေတစ်ခုမှာတော့ လက်ရှိဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခြေအနေ ကို အမှန်အတိုင်းလက်ခံဖို့ပါပဲ…..
အချစ်ဆိုတာဟာ…အသစ်မွေးဖွားတတ် တဲ့သဘောရှိပါတယ်…..ဘယ်တော့မှကုန်ဆုံးသွားတယ်ဆိုတာမရှိပါဘူး…လမ်းခွဲခြင်းခံလိုက်ရတဲ့သူများအတွက် ကတော့ …. ငါ့အပေါ်လုပ်ရက်လေခြင်း……သစ္စာမဲ့လိုက်လေခြင်း ဆိုတဲ့အတွေးမျိုးထက်…ငါ့ကိုသစ္စာဖောက်ဖျက်မိမှာ စိုးလို့ သူအရင်ဖောက်ပေးသွားတာပဲ လို့ တွေးပေးပြီးကျေးဇူးတောင်တင်သင့်ပါသေးတယ်….ကျွန်တော်ကိုယ်ချင်းမစာလို့ ပြောတာမျိုးမဟုတ်ပါဘူး…… အချစ်အသစ်နဲ့ အချစ်စစ်ဆိုတာမျိုးကိုထပ်တွေ့လာတဲ့အခါ အတိတ်ကကိုယ်လုပ်ခဲ့တာတွေကိုပြန်တွေးမိပြီးရယ်စရာတစ်ခုလိုပါပဲလားလို့ထင်မိပါလိမ့်မယ်…(ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် တစ်ယောက်တည်းကြိတ်ပြီးရှက်ပြုံးပြုံးရမှာ စိုးလို့သတိပေးတာပါ။)….ကျွန်တော်ခံစားဖူးတဲ့အသဲကွဲတယ်ဆိုတာကတော့”သူနဲ့ပက်သက်ပြီး…ကိုယ်မျှော်လင့်ထားတာ တွေ၊ယုံကြည်ထားတာတွေ ၊ စိတ်ကူးယဉ်ထားတာတွေ…..လေထဲအိမ်ဆောက်ထားတာတွေပေါ့ဗျာ…..အဲဒါတွေကို ကို ဆုံးရှုံးလိုက်ရပြီ ဆိုတဲ့ ရုတ်တရက်အသိ ကို နှလုံးသား က လက်မခံပေးနိုင်တာမျိုးဗျ…..ကိုယ့်ကို ကိုယ် ရှက်လည်းရှက်မိ ဒေါသလည်းထွက်မိ…..မျှော်လင့်ထားမိတာတွေအတွက်လည်း ယူကြုံးမရဖြစ်မိတာပေါ့ဗျာ…..အဲဒီတော့ဘာလုပ်လိုက်မိလဲ………….ကြေကွဲတယ်…..ပေါက်ကွဲတယ်ဗျာ….နည်းမျိုးစုံနဲ့ပေါ့(အသားတော့နည်းနည်းနာတယ်….ဟဲဟဲ)ဒါပေမယ့် အသိတစ်ခုတော့ရှိတယ်…….အဲဒါကတော့ သူ့အတွက် ငါ့ဘဝကို မပျက်စီးစေရဘူးလို့ စိတ်ထဲက တိတ်တိတ်လေးကြုံးဝါးမိတယ်…..ကိုယ့်ကို ကိုယ်လည်းအထပ်ထပ်သတိပေးမိတယ်….ငါသူ့အတွက်နဲ့တော့….ငါ့ဘဝကို ဆုံးရှုံးစေလို့ မဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့အသိပါ….ရှောင်လွှဲမရပဲ ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ စိတ်ခံစားချက်တစ်ခုကို ကျွန်တော်လမ်းကြောင်းပြောင်းပေးဖို့အတွက်ပဲ ကြိုးစားလိုက်တော့တယ်……သူ့ကိုသတိရမိတဲ့အချိန်တွေမှာ ကျွန်တော် တစ်ခြားအရာတွေကိုပိုလုပ်ဖြစ်တယ်ဗျာ…တစ်ချိန်တည်းမှာ နှစ်မျိုးအာရုံဝင်စားခွင့်မရှိတဲ့ စိတ် စေတသိတ်မှာ ကျွန်တော်သူ့အတွက် နေရာမပေးမိအောင် အမျိုးမျိုးကြိုးစားခဲ့တယ်….ပညာရှင်တွေပြောကြတာသိပ်ကိုမှန်ပါတယ်ဗျာ….တစ်ကယ်ပါ အချိန်ဆိုတာ စိတ်မှာ ခံစားရတဲ့ ဒဏ်ရာတွေကို ကောင်းကောင်းကြီးပျောက်ကင်းအောင်ကုပေးနိုင်တဲ့သမားတော်ကြီးပါ….တစ်နှစ်ဆိုတဲ့ကာလအပိုင်းအခြားတစ်ခုပြီးတဲ့ နောက်မှာ တော့ကျွန်တော် ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် အကောင်းဆုံး ဆောက်တည်နေတတ်သွားပါပြီ ….တစ်ခါတစ်ခါ တိုက်ဆိုင်လို့ သတိရမိတယ်ဆိုရင်တောင်….သူပေးခဲ့တဲ့ဒဏ်ရာ တွေကို ရဲရဲကြီးကြည့်ရဲ…..တွေးရဲတဲ့စိတ်ဓါတ်ကို ကျွန်တော်ရသွားပါ ပြီ။” ဒီနေရာမှာ သတိထားရမှာက သူ့အကြောင်းတွေးမိမှာ စိုးရိမ်လို့ဆိုပြီး ကိုယ့်ဘာသာကိုယ်အလုပ်ပေးတဲ့အခါ အကောင်းဘက်ကိုဦးတည် ဖို့ပါပဲ ….တစ်ကယ်လို့သာ ဦးတည်ချက်မှားသွားခဲ့ရင်တော့ တစ်ကယ့်ကို မတွေးရဲစရာဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်……နောက်တစ်ခုကတော့ အသဲ ကွဲတယ်ဆို တဲ့ဝေဒနာ မှာ သာယာ မနေမိဖို့ပါပဲ…အဲဒါကတော်တော် အရေးကြီးပါတယ်….တစ်ကယ်ပါ အသဲကွဲတယ်ဆိုတဲ့ အလွမ်းဓါတ်ရော နေတဲ့ ခါးသက်သက် ဝေဒနာဆိုတာ သိပ်ကိုစွဲမက်ဖို့ကောင်းပါတယ်….မတော်တဆ ထုတ်ထုတ်ကြည့်ရင်တောင် ရင်ဘတ်ကိုခပ်အောင့်အောင့်လေးဖြစ်ပြီးတော့ သွေးကိုနည်းနည်းပြန်ဆူစေတာအမှန်ပါပဲ……လောကမှာ အခါးဓါတ်ခပ်နှောနှော ပါတဲ့ ဘယ်လိုအရာမျိုးပဲ ဖြစ်ဖြစ် စွဲလမ်းစေတတ်ပါတယ်…….စွဲလမ်းမိသွားရင်တော့….”ကျန်းမာရေးကို……ဆိုးဝါးစွာထိခိုက်စေပါသည်” ဆိုတဲ့စာတန်း
ကိုဖတ်မိရင်တောင် …….. ရေးတဲ့သူကို အပြစ်တင်မိချင်ပါသေးတယ်…..သူ မသိလို့ရေးတာနေမှာ လို့လည်းတွေးချင်တွေးမိဦးမှာ…..ဒါတွေက ကျွန်တော် အသဲကွဲတာနဲ့ ပက်သက်ပြီး ကျွန်တော်တွေးမိတာလေးတစ်ချို့ကိုချရေးမိတာပါ..…ခံယူချက်ချင်းလည်းတူချင်မှတူမှာပေါ့နော်…..ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လွတ်လပ်စွာကွဲခွင့်ရှိပါတယ်…..
(မှတ်ချက်။ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်းရဲ့ ရင်တွင်းထင်မြင်ခံစားချက်လေးပါ ...)
Posted by လရောင်လေး at 10:38 AM
ပထမဆုံး၏ ရှေ့နောက်ဆုံး၏ နောက်
နားလည် ရခက်တတ်သော အချစ်